အဝလွန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ | OnDoctor
😷 299 Total Cases
😇 221 Recovered
By OnDoctor Editor	 On May 28, 2020 Last updated Jun 30, 2020
အဝလွန်ခြင်းဆိုတာဟာ ခန္ဓာကိုယ် သိပ်သည်းဆညွှန်းကိန်း (Body Mass Index) ပမာဏ ၃၀ နှင့်အထက်ရှိနေပြီဆို အဝလွန်နေပြီလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်းဆိုတာ မည်သည့်အသက်အရွယ် မရွေး၊ ကျားမ မရွေး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုပါ။ အဝလွန်ခြင်းရောဂါ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ နှလုံး​ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ၊ အိပ်ဟောက်ပိတ်ရောဂါ၊ အရိုးအဆစ်အမြစ်နာရောဂါ၊ စသည်တို့အပြင် စိတ်ကျရောဂါ အထိပါ စွဲကပ်နိုင်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းနှင့် စိတ်ကျ​ရောဂါဆိုတာ ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား?
ဟိုးအရင် သုတေသီများကတော့ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေဖို့ သေချာတဲ့ အထောက်အထားမပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းလေ့လာချက်များအရ အဝလွန်ခြင်းနှင့် စိတ်ကျရောဂါ ဟာ အပြန်အလှန် ဆက်စပ်မှုရှိနေတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်းကြောင့် ကြာလာရင် စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်လာနိုင်သလို စိတ်ကျရောဂါ ကြောင့် အဝလွန်ခြင်းဖြစ်လာတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့အခါ စိတ်ကျရောဂါပါ ဘာလို့တွဲဖြစ်လာရတာပါလဲ?
လူတစ်ယောက်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဟာ နဂိုပုံမှန်ထက်များလာပြီ၊ အဝလွန်ခြင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင် ကြာလာတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေဟာ ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေအပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့လည်း ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ လူကြားထဲမဝင်ဆန့်တော့တာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမ်ငယ်လာတာ၊ အကြောင်းအရင်းမရှိကြောက်နေတတ်တာ၊ စတဲ့ စိတ်ပူပန်မှုရောဂါ၊ စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါတွေ စွဲကပ်လာတဲ့အပြင် ကြာလာရင် စိတ်ကျရောဂါဝေဒနာပါဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
စိတ်ကျရောဂါရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေမှာကော အဝလွန်ခြင်းဟာ တစ်ခုအပါအဝင်လား?
စိတ်ကျရောဂါမှာ အအိပ်အစားမမှန်ခြင်းဆိုတဲ့ လက္ခဏာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက် အိပ်ချိန်မမှန်ခြင်း၊ စားချိန်မမှန်ခြင်း၊ တို့ဟာ ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်တဲ့ အတိုးချစားသောက်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ကျရောဂါခံစားနေရသူ ၇၀-၈၀ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ အဝလွန်ခြင်း ဝေဒနာကိုပါ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိတ်ကျရောဂါကိုကုသတဲ့ ဆေးတွေဟာ အစာစားချင်စိတ်ကိုပိုတိုးစေတဲ့အတွက် ပိုဝလာစေတတ်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းရောဂါကိုကုသတဲ့ တစ်ချို့ဆေးတွေဟာ စိတ်ကျရောဂါကိုပိုဆိုးစေနိုင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား?
အရမ်းအဝလွန်လို့ သောက်ရတဲ့တချို့ဆေးတွေ appetite inhibitorတွေမှာ စိတ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့ဟော်မုန်းကို တားနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိတတ်တာကြောင့် အစကတည်းက စိတ်ကျရောဂါ ခံစားနေရတဲ့သူဆို ရောဂါ ပိုဆိုးရွားသွားတတ်တဲ့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်နဲ့သေချာတိုင်ပင်ပြီးမှ ဆေးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းနှင့် စိတ်ကျရောဂါ ၂ခုစလုံးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေကြမလဲ?
ငယ်စဉ်ကတည်းက ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားကို တစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံး ၅ရက်ခန့် လုပ်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးပါ။
ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ အစာအိမ် နှင့် အူလမ်းကြောင်း ပြဿနာများ
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှု ဆက်စပ်ပုံ
အမေတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ LcFOS
ကလေးတွေက လူကြီးတွေထက် ကိုယ်ခံအားပိုနည်းတာလား…
သမီးမွေးထားရင် ဒါတွေ သင်ပေးပါ
ကလေးတွေအတွက် မရှိမဖြစ် ဗီတာမင်ဓါတ်နဲ့သတ္တုဓါတ်တွေ ရအောင်…
အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်းအစာ ဖြစ်စေမယ့် COVID-19 စပါယ်ရှယ်မီနူး